Amazing | My Burmese Blog
Posts in Category: Amazing	Non-Stop Train from Myanmar
On October 9, 2011	by Htoo Tay Zar	With	2 Comments	- Amazing	ယူကြု့မှာ ကွညျ့ရတဲ့ ဗီဒီယိုလေးပါ ဘယျသူရိုကျတယျတော့ မသိ ရိုကျတဲ့သူက အခြိနျကောငျး၊ နရောကောငျးမှာ ကငျမရာ ရယျဒီနဲ့ ရောကျသှားခဲ့တာပဲ။ ဘူတာမှာ မရပျတဲ့ အမွနျရထားပျေါကို ခရီးသညျတငျနတေဲ့ ပုံပါ။ ကွညျ့ရတာတော့ အသညျးယားစရာပါပဲ။ ရထားက တျောတျောအရှိနျမွနျပါတယျ အန်တရာယျလဲ အတျောမြားတယျ။ ခရီးဝေးသှား ရထားဖွဈပုံရပါတယျ ဒါ့ကွောငျ့ ဘူတာတိုငျးမှာ မရပျပဲ အမွနျသှားနတောပါ။ ဗီဒီယို ရိုကျတဲ့သူက နိုငျငံခွားသား ဖွဈမယျ့ပုံပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကြှနျတျောတို့ဆို ရိုကျလို့ မရဘူးခငျဗြ တားတယျ နောကျ ရုံးခနျးပါ ချေါပွီး ကြိနျးတယျလို့ ကိုစိုးကွီး ဆီကနေ ကွားဖူးတယျ။ အခုကတော့ အံ့ဩစရာ ကောငျးတဲ့ တိုကျဆိုငျမှု့ တဈခုဖွဈပါလိမျ့မယျ။ Amazing, YouTube	Burmese Tour Guide Kid Speaking4Languages
On April 4, 2011	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Amazing, Video	Rodney Mullen ဆို​တာ ဘယျ​သူ​လဲဆို​တာ​တော့ အရငျ​တုနျး​က play station 1 ဂိမျး​နဲ့ အခွား console ဂိမျး​တှေ​မှာ Tony Hawk’s Pro Skaters series ဆော့​ဖူး​သူ​တှေ​ကို အဆနျး​လုပျ​ပွော​ပွ​ဖို့ လို​မယျ မ​ထငျ​ပါ​ဘူး။ Rodney Mullen က စ​ကိတျ​ဘုတျ စီး​သူ​တဈ​ယောကျ​ဖွဈ​ပွီး ငယျ​စဉျ ၁​၀ နှဈကြျော​လောကျ​ကတညျးက ကှ​မျြး​ကငျြ​သူ​မို့ TV channel တှေ​က အစ ချေါ​ပွီး​ပွ​ရ​တဲ့ အထိ​အောငျ skate stunt တှေ​လဲ ကှ​မျြး​ကငျြ​တာ​ပါ။
Amazing, Skateboard, Talent	Continue Reading
On December 21, 2009	by Htoo Tay Zar	With	6 Comments	- Amazing, Knowledge	Vatican City က ကမ္ဘာပေါ်မှာ အသေးဆုံး နိုင်ငံဖြစ်ပြီး လူဦးရေ ၁၀၀၀ ကျော် နဲ့ အကျယ်အ၀န်းက ၁၀၈.၇ ဧရိယာပဲရှိတယ်။
Suicide Statistics တွေအရ တင်္နလာနေ့က ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေမှုအများဆုံးနေ့ဖြစ်တယ်။ (ရုံးပြန်ဖွင့်တဲ့ ရက်မို့ထင်ပါ့ =P )
On December 18, 2007	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Amazing, Image	ဒီနှစ် ၂၀၀၇ နှစ်ဦးပိုင်းက Russia က Omsk မှာ ကျတဲ့နှင်းတွေက အ၀ါရောင်နဲ့ လိမ္မော်ရောင်တွေကျပါသတဲ့။ ၂၀၀၈ မှာရော ကျဦးမှာလားမသိဘူး။ ကဲ ယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေ။ Ripleys
Snow, Snow In Omsk, Orange Snow
On December 15, 2007	by Htoo Tay Zar	With	2 Comments	- Amazing	ကျွန်တော်ဆီမှာ ရှိသမျှ t-shirt အားလုံးနီးပါး အနက်ရောင် တွေကြည့်ပဲဆိုပေမယ့်။ ဒီ t-shirt ကို လိုချင်တယ်ဆိုတာ အံ့သြစရာတော့ မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်တယ်။ ကြည့်လေ ဒီ t-shirt က equalizer နဲ့ မိုက်တယ် မဟုတ်လား။ ဒီ t-shirt က သီချင်းသံ၊ noise အလိုက် အဲဒီ equalizer bars တွေက လုပ်ပေးမယ် ကာလာတွေ ပြောင်းပေးမယ်။ T-Qualizer Shirt ပါတဲ့။ ကျွန်တော် သီချင်းနားထောင်တဲ့ အချိန်ဝတ်ရင် အဆင်ပြေမှာပဲ။ စက်လျှော်တော့ မရဘူးတဲ့ လက်လျှော်ပဲတဲ့။ လက်တော့ ညောင်းမယ်။ ဈေးက US $40 ပါပဲတဲ့ ThinkGeek မှာ ၀ယ်လို့ ရမယ်။ တထည်လောက် Xmas လက်ဆောင်ရရင် ကောင်းမယ်။=)
EL Lit Glowing Equalizer animates to ambient noise or music Battery Pack fits in small interior pocket inside shirt Each Equalizer bar reacts differently depending on sound frequency4AAA Batteries Required Battery pack is removable, shirt must be hand washed Watch action of T-Qualizer Shirt to the music @ You Tube
weird, t qualizer, t shirt
Satan Face From WTC (9/11)
On October 31, 2007	by Htoo Tay Zar	With	1 Comments	- Amazing, News	I got some weird picture through the Internet. It’s from World Trade Center. It’s weird. Gray Smoke look like Satan face. Some people say that’s God. I think it can’t be god coz you can see his devil eye and horn. This is not photo fake. I already searched in many sites. This Picture could not be explain. That’s picture was captured by CNN photographer. Actually Video. CNN has not made any comments about its picture. Although the image has been removed from their Web site, the video where the image came from can still be viewed. How do you think? I wanna know your thought. Please comment in this post.
Technorati Tags: weird, image, image from WTC, WTC, world trade center, ghost, satan, god, satan face from 9_11, 911, weird photo
Read News From About
Watch Satan Face From WTC 9/11 Video From CNN
Amazing Photoshop Skill
On October 25, 2007	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Amazing, Image	ဆောတီးဗျာ။ ကျွန်တော်ခုဏက ဒီပုံတွေကို တကယ် အစစ်တွေမှတ်လို့ ပို့စ် တင်မိတယ်။ ပြီးတော့မှ အကို fido ပြောမှ Worth 2000 သွားကြည့်လိုက်တာ။ အဲဒီ ဆိုဒ်က photoshop သင်တဲ့ ဆိုဒ်ဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်တော်က Metacafe က ယူလာတာဆိုတော့ မသိလိုက်ဘူး ဖြစ်သွားတယ်။ အခုတော့ photoshop skill တွေ ကြည့်လို့ရတာပေါ့ဗျာ။ =)
Technorati Tags: funny, amazing world, earth, amazing, image, photo, strange, weird world, amazing planet
On October 21, 2007	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Amazing, Cool	ပုထုဇဉ်မှန်သမျှ အရူးကြည့်ပဲ ဆိုတာ တကယ် မှန်ပါပေတယ်။ Sweden က Jonas ဆိုတဲ့ လူက 4,000m (13,123 ft) အမြင်ကနေ ခုန်ချပြီး လေထဲမှာ tattoo ထိုးသတဲ့။ အဲဒါ Guinness မှတ်တမ်း ၀င်သွားသတဲ့။ သူထိုးထားတဲ့ထဲက စာလုံး WFFT ဆိုတာက World’s First Freefall Tattoo ကို ဆိုလိုတာပါတဲ့။ ရူးပါပေ့။ တော်ကြာ မှားပြီး အစင်းကြောင်းကြီး ချစ်မိသွားရင် ဖျက်ရမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ Via : WFFT
Technorati Tags: guinness, wfft, freefall, crazy, weird, amazing, cool, tattoo